Faka kuhlu inguqulo entsha yeZulip Server 2.1, enye indlela eya kuSlack | Kusuka kuLinux
Faka kuhlu inguqulo entsha yeZulip Server 2.1, ehlukile kuneSlack
Ukukhishwa kohlobo olusha lweseva yeZulip 2.1 kusanda kukhishwa, okuyipulatifomu esebenza njengesisekelo sokuhambisa izithunywa ezifanele zenkampani ukuhlela ukuxhumana phakathi kwabasebenzi namathimba entuthuko.
Uhlelo isekela imiyalezo eqondile phakathi kwabantu ababili nezingxoxo zamaqembu. UZulip ingaqhathaniswa nensizakalo ye-Slack futhi ithathwa njengomlingani wangaphakathi wenkampani ye-Twitter, esetshenziselwa ukuxhumana nokuxoxisana ngezinkinga zabasebenzi emaqenjini amakhulu abasebenzi.
Izimali zinikezwa ukulandela isimo nokubamba iqhaza ezingxoxweni ezahlukahlukene ngasikhathi sinye usebenzisa imodeli yokubonisa imilayezo efana nentambo, okuyiyona ndlela ebucayi kakhulu phakathi kwamakamelo okuxhuma eSlack nendawo eyodwa yomphakathi ye-Twitter. Ukuboniswa ngasikhathi sinye kwazo zonke izingxoxo kukuvumela ukuthi umboze wonke amaqembu endaweni eyodwa, ngenkathi ugcina ukwahlukana okunengqondo phakathi kwabo.
Le phrojekthi ekuqaleni yasungulwa yiZulip futhi yavulwa ngemuva kokutholwa kwayo yiDropbox ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0. Ikhodi eseceleni kweseva ibhalwe ePython kusetshenziswa uhlaka lwe-Django. Isoftware yeklayenti iyatholakala ngeLinux, Windows, MacOS, Android, ne-iOS futhi kunikezwa ne-interface ye-web eyakhelwe ngaphakathi.
1 Yini okusha kuZulip Server 2.1?
2 Ungayithola kanjani iZulip Server 2.1?
Yini okusha kuZulip Server 2.1?
Kungezwe i- Ithuluzi lokungenisa idatha kusuka kumasevisi asuselwa ku-Mattermost, Slack, HipChat, Stride ne-Gitter. Lapho ungenisa kusuka ku-Slack, ukuxhaswa kunikezwa ngazo zonke izici ezinikeziwe lapho kuthunyelwa idatha ngamakhasimende wecebo lokulinganisa lenkampani.
Ukuhlela usesho lombhalo ogcwele, manjeungakwenza ngaphandle kokufaka i-plugin ekhethekile yePostgreSQL, ekuvumela ukuthi usebenzise amapulatifomu we-DBaaS afana ne-Amazon RDS esikhundleni se-DBMS yendawo.
Ukufinyelela kumathuluzi wokuthekelisa idatha kungeziwe kusixhumi esibonakalayo se-administrator (ngaphambili esasithunyelwa kuphela kusuka kulayini womyalo).
Ngaphezu kwalokho, kuyabonakala kule nguqulo entsha yeZulip Server 2.1 nel ukusekelwa kukaDebian 10 "Buster", Yize ngakolunye uhlangothi ukuxhaswa kwe-Ubuntu 14.04 kunqanyuliwe futhi ukuxhaswa kweCentOS / RHEL akuphothulwanga okwamanje futhi kuzovela ekukhishweni okuzayo.
Singathola futhi ukuthi uhlelo lokwazisa nge-imeyili lwakhiwe kabusha ngokuphelele, olwehliselwe kwisitayela esincane, esifana nohlelo lwezaziso lweGitHub.
Izilungiselelo zezaziso ezintsha zingeziwe que vumela ukulawula ukuziphatha izaziso zohlelo lokusebenza nezaziso ze-imeyili zezikhumba (isibonelo, @all), kanye nokushintsha indlela yokubala imilayezo engafundiwe.
Ukuqaliswa kwe- isango lakhiwe kabusha ukuze lihlaziye i-imeyili engenayo. Kungezwe ukusekelwa kokuhumusha umlayezo we-Zulip kuhlu lwama-imeyili, ngaphezu kwamathuluzi abekhona phambilini wokuhlanganiswa nezinsizakalo zeZulip zokuthumela izincwadi.
Kungezwe ukusekelwa kokufakazela ubuqiniso kwe-SAML (ulimi lwemakhaphu lokuqinisekisa).
Ikhodi ibhalwe kabusha ukuhlanganiswa nezindlela zokuqinisekisa ze-Google: Zonke iziphetho ze-OAuth / zokufakazela ubuqiniso zenhlalo ziphinde zenziwa kusetshenziswa imodyuli ye-python-social-auth.
Ku-interface yomsebenzisi, kunikezwa opharetha wokusesha "imifudlana: umphakathi", okunikeza amandla okusesha wonke umlando ovulekile wezincwadi zenhlangano.
I-Syntax ingezwe kumaki weMarkdown ukuxhumanisa nezihloko zokuxoxisana.
Amasethingi omongameli anwetshiwe ukuze kulawulwe ngokukhetha amalungelo wabasebenzisi wokudala nokumema iziteshi zabo.
Isigaba sokuhlola se-beta sisuse ukuxhaswa kokubuka kuqala amakhasi e-web ashiwo kokuthunyelwe.
Ukubukeka kulungiselelwe, ukufakwa ohlwini, izingcaphuno namabhulokhi ngekhodi kubuyekezwe ngokukhethekile.
Amamojula amasha wokuhlanganisa ane-BitBucket Server, i-Buildbot, i-Gitea, i-Harbour ne-Redmine engeziwe. Ukufometha okuphuculwe ngokuphawulekayo kumamojula wokuhlanganisa akhona.
Ungayithola kanjani iZulip Server 2.1?
Okwalabo abanentshisekelo kule nguqulo yamaseva, ungathola imibhalo edingekayo ngokuqaliswa kwayo, okuchazwe kahle kakhulu Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Faka kuhlu inguqulo entsha yeZulip Server 2.1, ehlukile kuneSlack
egrep: izibonelo zomyalo ku-GNU / Linux
Ngenxa yokuphela kokusekelwa kweWindows 7, abathuthukisi beVivaldi bakumema ukuthi uthuthele eLinux